Open Video: Fifampiresahana Wireside Maneran-tany Miaraka Amin’i Lawrence Lessig · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2017 11:37 GMT
(Marihina fa tamin'ny 10 Febroary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra)
Larry Lessig, sary avy amin'i Robert Scoble
Ahoana ny fisera amin'ny antonony, ahoana ny ampifanarahana ny fizakàmanana amin'ny vanim-potoana nomerika, ary ahoana ny ampivelarana malalaka ny fanehoan-kevitra, ny fampianarana, ny fampifangaroana sy ny fikarohana amin'ny lahatsary? Midira amin'ny 25 Febroary 2010 hahitana sy hahenoana an'i Lawrence Lessig rehefa niresaka momba ireo lohahevitra ireo ao amin'ny tranonkala Open Video Alliance izy, na jereo ny fandefasana ny lahatsary any amin'ny tanàndehibe misy anao. Natao tany ivelan'ny Etazonia tany Canada, Goatemalà, Brezila, Isiraely sy India ny fandefasana ny lahatsary , na izany aza, raha liana ianao, dia afaka nampiantrano ny anao manokana amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny Open Video Alliance .
Lawrence Lessig , mpampianatra lalàna sady mpikatroka ara-politika ary nanorina ny biraon'ny mpikambana ao amin'ny Creative Commons ihany koa dia niresadresaka nandritra ny 45 minitra, narahina fanontaniana 30 minitra sy fotoam-pamaliana narindran'i Elizabeth Stark ao amin'ny Open Video Alliance. Azo apetraka amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenirohy #wireside ao amin'ny twitter ny fanontaniana. Ary raha ao amin'ny twitter ianao, tsy aleo ve manjohy an'i @Lessig sy @openvideo ?
Nisy ny fifaninanana Open Video maharitra 60 segondra ho an'ireo izay liana tamin'izany ary nahazo dia nankany amin'ny Fetibe Fifampikasohana any Atsimo sy Atsimoandrefana (SXSW). Na jereo fotsiny ny lohahevitra momba ny hoe inona no atao hoe open video ho an'ny namana maro manerana izao tontolo izao.
Raha mbola tsy azonao tsara ny dikan'ny hoe Open Video ? Maninona raha mijery ny fizotry ny fifaninanana nataon'i Qasim Virjee izay manazava ny fomba fijeriny manokana momba ny atao hoe Open Video :
Inona no atao hoe Open Video? avy amin'i Qasim Virjee tao amin'ny Vimeo.